समय र परिवेश: फुजीसानको टाकुरामा लै लै. . .
Posted by Dhruba Panthi at 10:30 AM
यात्रा संस्मरण राम्रो लाग्यो । सूर्योदय भएको समय ५:१८ जस्तो लाग्छ । खैर एउटै कुरा हो । यात्रा धेरै रमाइलो भएको थियो, जसको प्रस्तुतिकरण पनि रमाइलो पाराले गर्नुभएको रहेछ ।
Dhruba Panthi September 24, 2011 at 9:24 AM
डमरू सर, प्रतिक्रियाका लागि हार्दिक धन्यवाद! सूर्योदयको समयको बारेमा भएको त्रुटी सच्याएको छु:)
Chaitanya October 7, 2011 at 11:16 PM
आफु नचढेको भए पनि बडो नजिकै बाट बुझ्न पाईयो है फुजिसानलाई !तस्बिरहरु पनि असाध्यै राम्रा !
यहाँलाई बिजया दशमीको हार्दिक शुभकामना !
Dhruba Panthi October 11, 2011 at 4:50 AM
यात्रा संस्मरण र तस्वीरहरु मन पराइदिनुभएकोमा धन्यवाद, चैतन्य सर। तपाईंलाई पनि ढिलै भए पनि विजयादशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!